Dowlada Kenya oo heegan galisay ciidankeeda ku sugan xadka ay ... | Universal Somali TV
Dowlada Kenya oo heegan galisay ciidankeeda ku sugan xadka ay la wadaagto Dalka
Amaanka guud ee gobolka waqooyi Bari Kenya ayaa aad loo adkeeyay si looga hortago falal Argagixiso in ay ka dhacaan waxaana heegan la galiyay ciidanka Amniga ismaamulka Garissa oo xad la wadaaga dowlad goboleedka Jubbaland.
Arintaan ayaa la xiriirta booqashada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo la filayo in uu xariga ka jaro saldhiga ugu weyn ee milatariga Kenya ku leeyihiin gobolka waqooyi bari oo laga dhisay magaalada Garissa.
Saldhigaan ayaa noqon doono mid ay ku tiirsanaan doonaan milatariga Kenya ee ka tirsan dallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom ee ku sugan gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Dhismaha saldhigaan ciidan ayaa soo socday sadexdii sano ee la soo dhaafay waxaana dowlada Kenya ay uga dan leedahay in uu noqdo xarunta ugu weyn oo ay ka duulaan milatariga ku sugan gobolka Xeebta iyo waqooyi Bari oo Al-Shabaab weeraro uga Geesteen.
Todobaadkii hore ayey aheyd markii 11 askari lagu dilay weerar loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso oo ka dhacay xadka Kenya ay la wadaagto dalka, waxaana sheegtay ururka Al-Shabaab.
Kan-xigaHey,adaha u dooda xuquuqda aadanaha o...
Kan-horeInkabadan konton qof oo ku dhintay qa...
54,067,367 unique visits